Avy any an-kavia ity zaza ity no niampita niankavanana, an-kevitry ny handeha hividy zavatra raha ny tombana. Notsenan’ilay fiara 4x4 izy ka niankarapoka raha araka fanazavan’ireo nanatri-maso.Tany amin’ny lohany no tena voa mafy. Niboiboika nihazo ny lamosiny hatrany amin’ny tongony ny ra, antony tsy nahatazonana ny ainy intsony. Efa nisy ihany ny ezaka nataon’ireo nanatri-maso tamin’ny fitondrana azy teny amin’ny hopitaly saingy lavo ihany ilay tsy manan-tsiny. Raha araka ny loharanom-baovao azo dia tsy eto an-drenivohitra ny tompon’ilay fiara fa any amin’ny faritany. Notazonin’ny polisy ao Tsaralalana vonjimaika ilay mpamily ary efa mandeha ny fanadihadiana ny amin’ny hanolorana azy ny fitsarana. Tsiahivina fa mbola nahitana ireny sarina sainam-pirenena miloko fotsy,mena maitso ireny teo amin’ny tarehin’ity zazalahy kely namoy ny ainy ity.